2AgCl → 2 Ag + Cl2
koloriin qalin lacag koloriin
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AgCl → 2Ag + Cl2
Waa maxay xaaladda falcelinta AgCl (kloriinta qalinka)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo Cl2 (chlorine)?
Dhacdada ka dib AgCl (kloriinta qalinka ah)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AgCl → 2Ag + Cl2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ag (silver chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cl2 (silver chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
bromin chlorate potassium koloriin
(kanu đỏ) (trung) (dib u eeg) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Br2 + 2KClO3 → Cl2 + 2KBrO3
Waa maxay xaaladda falcelinta Br2 (bromine) ee uu la falgalo KClO3 (potassium chlorate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo KBrO3 ()?
Br ayaa la falgala KClO3
Dhacdada ka dib Br2 (bromine) waxay la falgashaa KClO3 (potassium chlorate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Br2 + 2KClO3 → Cl2 + 2KBrO3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KBrO3 (potassium chlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KBrO3 () badeecad ahaan?
6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + Kll
koloriin koloriin chlorate potassium koloriin biyaha chloride potassium
(xoog leh) (xoog leh) (dib u eeg) (xoog leh) (trung)
6 1 3 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + Kll
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo H2O (biyaha) iyo KCl (potassium chloride)?
Kalibaloriin kaloriin waxay la falgashaa HCl
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa KClO3 (potassium chlorate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + Kll
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (potassium chlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KCl (potassium chlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KCl (potassium chloride) badeecad ahaan?